Alitara: Ayacuchano: Fanehoana ny kanto peroviana | Vaovao momba ny dia
Alitara amin'ny Ayacuchano
El alitaran'i ayacucho Iray amin'ireo fanehoana ekena indrindra amin'ny zavakanto peroviana izy io. Izy io dia fanehoana kanto an'ny faritra Ayacucho izay niandohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny antecedent akaiky indrindra amin'ny alitara ankehitriny dia ny sanmarkos na Boaty San Marcos, novolavolaina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, fanomezam-boninahitra an'i San Marcos, olo-masina mpiaro ny omby.
Ireo alitara dia boaty mahitsizoro, vita amin'ny sedera matetika. Na dia tsy misy refy mahazatra aza dia refesina 32 sentimetatra ny halavany x 26 santimetatra ny sakany. Eo amin'ny farany ambany izay apetraka ny sary dia 6 santimetatra eo ho eo. Matetika ny lamosina dia rakotra hazo manify ary ny varavarana miraikitra amin'ny boaty amin'ny kofehy hoditra. Tsy toy ny sanmarkos, ny lohahevitry ny alitaran-kazo dia mifandraika amin'ny antony nentim-paharazana sy ara-pivavahana toy ny filaharana, ady omby ary ady akoho.
Mampiseho virijina bevohoka sy olomasina lava hatoka izy ireo. Ny fihetsiketsehana tia tanindrazana toy ny diabe miaramila dia misolo tena ihany koa na natokana ho an'ny mpilalao, filoham-pirenena, jeneraly, tantsaha ary mahery fo. Nampiasaina hanehoana fanoharana politika aza izy ireo.
Zava-dehibe ny milaza fa ny teny hoe "alitara" dia vondrona lehibe iray ao ambadiky ny alitaran'ny fiangonana.
More Information: Torolàlana momba ny dia mankany Ayacucho
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Alitara: Ayacuchano: Fanehoana ny kanto peroviana